Global Voices teny Malagasy » Manondrotra ny Fangaraharàna ao Eoropa Afovoany sy Atsinanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Jona 2017 12:03 GMT 1	 · Mpanoratra Sylwia Presley Nandika (fr) i Suzanne Lehn, imanoela fifaliana
Sokajy: Hongria, Polonina, Repoblika Tseky, Slovakia, Fampandrosoana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Teknolojia mampangarahara asa
Manana tetikasa fampandraisana anjara ny vahoaka amin'ny sehatry ny fangaraharana governementaly i Eoropa afovoany sy atsinanana, izay ny ankamaroany dia miasa miaraka amin'ireo fikambanana fototra manome fanohanana ara-bola sy ara-teknika, toy ny Open Society Institute , MySociety  sy ny Transparency International . Maro amin'izy ireo no miasa ihany koa miaraka amina orinasa sy media eo an-toerana. Ny tompon'ity lahatsoratra ity dia nitafa tamin'ireo olona mirotsaka ao anatinà tetikasa toy izany any Pôlônina sy Hôngria, ary efa niteny koa mombanà asa fampandrosoana avy amin'ny Repoblika Tseky sy Slôvaky, toy ny KohoVolit.eu . Mialohan'ny hijerena akaikikaiky kokoa ireo tetikasa fakàn-tahaka tamin'ity faritra ity, ireto ny fomba fijery ankapobeny navelan'ny fandinihana ireo tetikasanà fangaraharana lehibe sasantsany tao amin'ny Repoblika Tseky, Hôngria, Pôlônina sy Slôvakia [rohy amin'ny teny anglisy].
Voalohany indrindra dia miavaka amin'ny bika aman'endrika ivelan'ireo nanangana azy, ny fifandraisany amin'ny mpitondra, ary koa amin'ny toetran'ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ao amin'ny firenena ireo tetikasana fangaraharana isaky ny firenena. Manaiky ny filàna ny famoahana ny vaovao mifandray amin'ny fitondrana amin'ny fomba malefaka sy mora atelina ireo tetikasa rehetra ireo. Na miaraka amin'ny fanohanan'ireo mpiasa an-tsitrapo maro na miaraka aminà antokona mpikatroka vitsivitsy kokoa, samy mandany fotoana be amin'ny zavatra ataony ny rehetra kanefa mbola miady mba hahazoana ny torohay ofisialy marina sady mazava tsara izay tokony homena ny vahoaka. Maro amin'izy ireo no mifantoka amin'ny fanontaniana mikasika ny andraikitry ny governemanta. Amina tranga maro, ny fiarahany miasa amin'ireo haino aman-jery mahazatra dia toa mitana anjara asa lehibe ao amin'ny fahafahany manao tsindry amin'ireo solombavambahoaka sy ireo tomponandraiki-panjakana hafa. Kendren'ireo tetikasana fangaraharana sasany ihany koa ny hamaha ny fahalemena fahita matetika asehon'ny vahoaka ao amin'ny faritra manoloana ny kolikoly, izay, toy ny ivoahany taminà serasera niarahana tamin'ny Kepmutatas  ao Hongria, dia manana ny loharanony ao amin'ny tsy fahampiana fahalalana ny paika ofisialy efa misy izay ahafahan'ny vahoaka mampahafantatra ny faharatsian'ny fitantanan'ny fanjakana. Vetivety dia tsapa fa ao Eoropa afovoany sy atsinanana, dia manan-danja toy ny manaporitra ireo solotenam-panjakana mba hampangarahara azy ireo kokoa eo amin'ny zavatra ataony sy ny fandiambola ataony, ny manentana ny vahoaka amin'ny fangaraharana sy ny fomba fanoherana ny kolikoly.
Nanatrika resaka niaraka tamin'ny KohoVolit.eu  tany amin'ny Repoblika Tseky sy Slovakia izahay, hetsika an'olon-droa mazoto izay mandany ny fotoany manintona ny saina manodidina ireo parlemanteran'ny firenena roa, ary manodidina ireo solombavambahaka ao amin'ny parlemanta eoropeana. Toy ny voatondro ao amin'ilay tafatafa, ao anatin'ny tsy fahampian'ny fandraisan'ny vahoaka anjara amin'ny politika, sy ao anatin'ny tsy fahampian'ny torohay ofisialy voarafitra any amin'ireo tranonkala parlemantera no misy ireo fanamby fototra.
Mampiantrano tetikasa iray mahaliana momba ny fangaraharana i Slovakia, ny Alliance Fair Play , izay ao anatiny no hangatahana ireo politika mba haka anjara mavitrika amin'ny tetikasa ary raha tsy manao izany ry zareo, dia mety hiatrika fandrakofana haino aman-jery mikasika ilay lohahevitra marefo indrindra amin'ny fotoana tena saropady, izay amin'ny manakaiky ny fifidianana. Amin'izany ihany, dia teraka ny paikady mampiaraka ny fikarohana sy ny angondrakitra ho an'ny daholobe miaraka amina fifanomezan-tànana amin'ireo haino aman-jery mahazatra mba hanaovana tsindry amin'ireo olon'ny politika amin'ny fombana fangaraharana lehibe sy fandraisana andraikitra mandritra ny fe-potoana itondran'izy ireo.
Any Hongria, ny tetikasa Kepmutatas.hu  dia mamaly ny fanambin'ilay fanolorana mampalahelo ny vaovao natao ho an'ny daholobe amin'ny alalan'ny fitaovana mahate-ho-tia mahafinaritra ny maso mba hanombanana ny fandaniambola tsy avoaka amin'ny fampielezankevitr'ireo antoko politika fototra, amina tarehimarika tsotra misy rohy ho amin'ny antsipirihany bebe kokoa. Na eo aza ny fanohanana avy amin'ny haino aman-jery sy antso mazava hanao hetsika, mbola misy ihany tsy fahampiana finiavana politika mba hanovàna ny famatsiambola politika. Tsy voatery hanabaribary ny fandaniambolany amin'ny fampielezankevitra ireo antoko politika, ka lasa miasa mikajy tarehim-bola novinavinaina ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy mpandamina tetikasa. Mahazo doka avy amin'ireo haino aman-jery mahazatra ilay tetikasa, saingy avy amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy ihany koa, toy ny Facebook.
Any Pôlônina, misy tetikasa vitsivitsy mendrika ny ho tanisaina. Sejmometr.pl  dia varavarana [amin'ny teny poloney] izay mamerina mampiely ny torohay ofisialy mikasika ireo tetikasana lalàna mbola am-pandehanana sy ireo mpanao lalàna tafiditra ao anatin'ny fanoratana azy ireny. Manolotra toro-evitra mikasika ny lalàna ihany koa izy, mandrisika ireo mpitoraka blaogy hiaraka hiasa amin'ireo andininy, ary mitaky rakitra misimisy kokoa avy amin'ireo mpitantana ilay tranonkala parlemantera. Stowarzyszenie Art. 61  (anarana izay mitodika amin'ny andininy 61 ao amin'ny lalàmpanorenana poloney, milaza fa misokatra ho an'ny daholobe ny fampahalalana mikasika ny fitantànana) no fikambanana izay manatanteraka ny sasantsasany amin'ireo tetikasana fangaraharana ao amin'ny firenena. Ny hetsika tantaniny Kandydaci2009  no andiany faharoa (taorian'ny dika iray mitovy tamin'ny 2005) amina vavahady natao hanampiana ny vahoaka hisafidy ny solontenany ao amin'ny Parlemanta Eoropeana amin'ny fanolorana ny mombamomba sy ny tetikasan'ireo kandidà, ary koa ireo torohay mikasika ireo solontena tsy tia miara-miasa [ amin'ny teny poloney ireo rohy roa ireo]. Ny tetikasa kambana aminy, Mam Prawo Wiedzieć  (‘Manana zo hahalala aho’) [amin'ny teny poloney] dia famerenana mijery mitovy an'ireo kandidà amin'ny filosoana ny vavambahoaka poloney, miaraka amin'ny ”Taridàlana ho an'ny olom-pirenena” natolotra izay manome fanazavana fohy momba ireo lalàna mifandraika amin'ny zo sivily mahakasika ny fangaraharana sy andraikitra. Watchdog.pl  (“Alika mpiambina”) dia Fikambanana Tsy Miankina (ONG) izay miaraka miasa akaiky amina fikambanana hafa maro mba hampianatra, hiaro ary hanohana ny fampandrosoana ao anatin'io sehatra iray io ihany. Ireo fikambanana poloney ireo dia samy miantso tambajotra tsara orina ahitàna olona mitovy finiavana mba hampahafantatra ny asany sady amin'ny tontolo tena izy no sady amin'ny an'ny tambajotran'ny haino aman-jery sosialy.
Tam-pamakiana ny trangam-pianarana tao amin'ny Repoblika Tseky sy Slovakia, ary ihany koa nandritra ny resaka nifanaovany tamina mpikatroka poloney sy hongroà, tsy nanadino ny nanamarika olana iray hafa ny mpanoratra : ny fiarahana miasa eo anivon'ny faritra. Hita mizara ny fitaovany amin'ny any ivelany ny Fair Play Alliance , fantatra fa mbola mifandray foana amin'ireo tseky mpikatroka i Kepmutatas.hu  [ amin'ny teny hongroà], saingy toa voafetra ny fifanakalozana torohay eo amin'ireo ekipa ireo. Amin'ny heviny manokana dia mahita fahafahana lehibe ho an'ny hetsiky ny fangaraharana sy ny haino aman-jery sosialy ao amin'ny faritra ny mpanoratra. Nanome fotoana tsara mba hampiombonana ny fahaizana sy fahalalana ho an'ny ONG maro ilay lasy fanaovaozana ara-tsosialy  tany Bratislava. Hamory manampahaizana avy amina fikambanana sy sehatra samihafa mba hifampizara ny fahalalany sy tambajotrany ny Fihaonambe Fahatokisana,  andiany fahadimy, fihaonambe izay fanao isan-taona [amin'ny teny poloney], ka hatao amin'ny faran'ny volana Mey izao any Varsôvia. Wikimania , izay hatao ny volana jolay any Gdansk, dia mikendry ny hamory ireo matianina manerana ny faritra, izay hanome ihany koa fahafahana hanorina tambajotra. Ary, tsy ny kely indrindra, manosoka hevitra ny hamarana ny vanim-potoana fahavaratra amina hetsika miendrika barcamp izay natokana ho an'ny fangaraharana fotsiny ny Watchdog . Manantena izahay fa ny Tambajotra Teknolojia ho an'ny Fangaraharana dia hitondra fiarahana miasa mafimafy kokoa mihoatra ireo sakana jeografika sy fiteny mba hampaherezana ny fanakambanana ny fahalalana sy ny hevitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/22/102086/
 Alliance Fair Play: https://transparency.globalvoicesonline.org/project/fair-play-alliance
 ilay lasy fanaovaozana ara-tsosialy: http://www.sicamp.org/?p=359
 Fihaonambe Fahatokisana,: http://2010.confidence.org.pl/